Photo of road “trips images”လမ်းတွေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Photo of road “trips images”လမ်းတွေ…
Photo of road “trips images”လမ်းတွေ…
Posted by ဂ်စ္စူ on May 21, 2011 in Photography | 10 comments
ဓာတ်ပုံ – rtw2o1o.blogspot.com
Digital Photography School ဆိုတဲ့ဆိုဒ်လေးကနေ လမ်းပုံစံတွေ အမျိုးမျိုးကို ရသလောက်စုတင်ထားတာလေးတွေ ့မိပါတယ်..။ဓာတ်ပုံဆရာအမျိုးမျိုးရဲ့ လမ်းကိုပဲ သီးသန် ့ဦးစားပေးရိုက်ယူထားတဲ့ လက်ရာလေးတွေပေါ့ဗျာ..ကျနော်လဲ အားကျမခံ မြန်မာနိုင်ငံက လမ်းလှလှလေးတွေ ရှာပြီး တင်ပေးချင်ပါသေးတယ်..လောလောဆယ်တော့ အပေါ်ကမြင်းလှည်းကလေး မောင်းနေတဲ့ပုံနဲ ့ပဲ……။………………..။
Sippanont Samchai,Ben Fredericson,fatboyke,Berenice Decados, Paolo Margari,Tambako the Jaguar,ecstaticist,Tricky,Etrusia UK,joiseyshowaa,Pörrö,Bartek Kuzia,Matthew Fang,gari.baldi,eir@si,Shahram Sharif,Martino’s doodles,solakoko,purplemattfish,MSH*
ဒီအောက်ကပုံတွေကတော့ friendsmyanmar.com မှတစ်ဆင့် ကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
လှလို့ ပုံတစ်ချို့ ကူးယူသွားကြောင်း…………
Wow! Great Road Pictures!
By seeing them,i get some ideas of our human beilngs ‘ lives!We have walked many different roads
in our long way in the circles of being reborn.
How long our journey will be?
When will it end up?
Not sure up to now! And you?
It’s just sharing my ideas coming out while i see yr beautiful and lovely pictures of Road.
အရမ်းလှပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်းဒီလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှပတဲ့လမ်းလေးတွေကိုတင်ပေးပါဦးလို့
ဘဝခရီးလမ်း လို့တောင် ဆိုချင်တယ်။ သာယာကြည်နူးဖွယ်တွေလည်းပါရဲ့၊ အကွေ့အကောက်တွေလည်းပါရဲ့၊ သဲထိတ်ရင်ဖိုတွေလည်းပါရဲ့။ လမ်းတွေပေါ်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားလိုက်တာ အောင်မြင်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ဝမ်းသာမှု၊ ကြေကွဲမှု၊ စွန့်စားမှု တွေကို မြင်မိသလိုပဲ။
မမ ကို ထောက်ခံပါတယ်
မမ ပြောတာတွေကို ထောက်ခံပါတယ်လို့ ပြောတာပါ
ကူးယူလိုက်ပြီနော် … ခွင့်မတောင်းတော့ဘူ.း … ဟီးဟီး